သူငယျခငျြး ၂ ယောကျ – My Blog
သူငယျခငျြး ၂ ယောကျ
ကနြျောတို့ သူငယျခငျြးနှဈယောကျပါ… စနသေား နှဈယောကျ ပါ… ကနြျောက ထှနျးထှနျး သူငယျခငျြးက နိုငျဝငျးပါ တဈရပျကှကျတညျး တှငျ ကွီးပငျြးခဲ့သူမြား ငယျသူငယျခငျြးမြား ဖွဈပါသညျ။ ကြောငျးပွေးလညျးတူတူ.. ရနျဖွဈလညျးတဈ ယောကျနှငျ့ရနျဖွဈသူကို တဈယောကျကဝိုငျးခြ ခဲ့လောကျအောငျ ကနြျောတို့ ခငျမငျကွသညျ။ သူက ငယျငယျထဲက မိနျးမ မြားကိုစိတျဝငျစားတဲ့ ကောငျ ပါ…သူ့ ကွောငျ့ကနြျောလညျး မိနျးမမြားကို စိတျဝငျစား တတျလာ သညျ… တခါတခါ ကနြျောတို့နှဈ ယောကျ ဘေးအိမျက မိနျးမမြားရခြေိုးသညျကို တူတူခြောငျး ကွသညျ..ကောငျမလေးမြား မိနျးမ မြားကို တူတူပဈမှားကွသညျ။ မိနျးမမြားအကွောငျးတူတူ အားပါးတရ ပွောတတျကွသညျ။ ကနြျောတို့ ပဈမှားသညျ့မိနျးမမြားတှငျ လငျရှိမိနျးမမြား… ကလေးအမမြေား လညျးပါသညျ။
ကနြျောတို့မိဘမြားက အစိုးရဝနျထမျးမြားဖွဈကွသညျ… ငှကွေေးအားဖွငျ့ မခမျြးသာကွ ပါ.. ဒါကွောငျ့လညျး အသကျ ၁၈ နှဈမပွညျ့မှီမှာပငျ ကနြျောတို့ ပညာရေးကိုစှနျ့ခှာခဲ့ကွပါသညျ.. ရနျကုနျမွို့က ဟျောတယျ တဈခုတှငျ အတူတူပငျအလုပျရကွပါသညျ။ ဟိုတယျမှာပငျနသေညျ..ကနြျောတို့ ၂ ယောကျမှာ ဝနျထမျးမြားထဲတှငျ အငယျဆုံး ဖွဈ သဖွငျ့အားလုံးကို လေးစားစှာဆကျဆံရပါသညျ… မကျြစိသူငယျနားသူငယျနှငျ့အလုပျထဲကိုရောကျလာသူ မြား ဖွဈသညျ့အတှကျ အားလုံးကို သငျယူကွရပါသညျ… အရငျ က ဟိုတယျဆိုသညျမှာ ဘာမှနျးမသိခဲ့ သူ ကနြျောတို့ သူငယျခငျြး နှဈယောကျ တဖွေးဖွေးခငျြး လုပျငနျးတှကေိုနားလညျလာခဲ့သညျ။ ဟိုတယျမှာအသားကလြာတယျ… ဟိုတယျမှာလုပျတဲ့သူတိုငျးက တခွား အလုပျတှမှောလုပျတဲ့သူတှထေကျ မိနျးမ- ယောကြားတှအေကွောငျး ကို ပိုသိကွပါတယျ..မိနျးမဆိုတာ ဟိုတယျ လုပျငနျးနဲ့မပတျသကျ လို့ကိုမရဘူးလေ… အလုပျတှကေိုနားလညျသလို မိနျးမတှကေိုပိုစိတျပါဝငျစားလာခဲ့သညျ…ခန အခြိနျပိုငျးလာတညျးသူစုံတှဲမြား..
ကိုလညျးတှေ့ ရငျ အားကြ ကာ စိတျထဲအကွီးအကယျြပဈမှားတတျလာသညျ..ကနြျောကလညျး ကနြျော ပဈမှားသညျ့ ဆျောမြားကိုလညျး နိုငျဝငျးအားပွောပွတတျသလို..နိုငျဝငျးကလညျးသူစိတျထနျသညျ့မိနျးမ မြား ကိုလညျး ကနြော့ကို ပွောပွတတျသညျ… ဟိုတယျကလညျးနစေရာပေးသဖွငျ့ကနြျောတို့နှဈယောကျစလုံးအိမျမပွနျကွတော့..အမကေို့တော့လခ ပေးသညျ့အခြိနျက လှဲ၍ မပွနျကွဘဲ အလုပျမှာပြျောနကွေသညျ။ ဟိုတယျမှာလညျး သူငယျခငျြးမြားရလာပါတယျ. တဈရကျ မနျနဂြောကွီး မှ ကနြျောတို့ နှဈ ယောကျကိုချေါသဖွငျ့ သူ့ရုံးခနျးသို့သှားရသညျ…သူဌေးလညျး ရောကျနှငျ့ နသေညျကိုတှရေ့သညျ။ သူဌေးမှာ မွနျမာပွညျမှေးတရုပျလူမြိုး ဖွဈပါသညျ။ သူမကျြနှာထားကို ကွညျ့လိုကျရတာနဲ့ အားလုံးက ကွောကျရ မညျ့ ရုပျရညျမြိုးဖွဈပါသညျ။
မငျးတို့ကို ယုံကွညျစိတျခလြို့ အခု မာဆတျ၂ခနျးမှာအလုပျခိုငျးမယျ.. လို့ ဂြာကွီးက စပွောပါတယျ.. ဟုတျကဲ့..ရပါတယျ ကနြျောတို့ ၂ ယောကျ တဈယောကျမကျြနှာတဈယောကျကွညျ့လိုကျကွပါတယျ..ကနြျောတို့ ဟိုတယျမှာက အတှဲ တှလေညျးလာကွတာမြားတယျ..အခြိနျပိုငျးအတှဲတှေ ဆိုတာ ခနခန လာလှနျးလို့ ကနြျောတို့ အားကခြဲ့ရတာ တှေ …ကိုယျလညျးအဲလို ကာမအရသာခံစားမယျဆိုတဲ့ စိတျဆန်ဒတှကေို မနညျးထိနျးနရေတဲ့ ကနြျောတို့ စိတျထဲ လနျ့သှားမိပါတယျ..ရငျလညျးခုနျလာပါတယျ..
ဒီလိုနဲ့ ကနြျောတို့လညျး ဟိုတယျမှာ ဆီလိမျးမာဆတျအခနျးဖှငျ့ဖို့လိုတာတှေ လုပျပေးရငျးနှငျ့ တဈလ လောကျကွာ သှားပါတယျ..ဟိုတယျက ၇ ထပျဆိုတော့ ၅ ထပျမှာအဲလို အခနျး ၁၀ ခနျးယူလိုကျပါတယျ… ဟိုတယျဆိုတာ အခနျးက အမွဲလိုလို ပိုနတောဆိုတော့ အခနျးလှတျမထားတဲ့ သူဌေးကိုလညျး စိတျက ခြီးကြူးမိပါတယျ.. ဆီလိမျးမာဆတျဆိုတာသိကွမှာပါနျော… ဧညျ့သညျက.ခါးမှာ ပုဝါဘဲပတျထားရတယျ… ဆီနဲ့လိမျးပေးတာလေ တဈကိုယျလုံးကို ..ယုယုယယနဲ့ ပေါ့နျော.. အသာအယာလေး နှိပျပေးရတယျ မာဆတျခနျးက ထူးခွားတာက တံခါးမှာ အတှငျးကိုကွညျ့နိုငျတဲ့အပေါကျ တှပေါတယျ..အထဲက ဘာဖွဈနေ တယျ ဆိုတာ အပွငျက လာကွညျ့နိုငျတာအောငျလုပျထားတာပါ…နောကျပိုငျးကနြျောတို့ အတှကျ ခြောငျးကွညျ့လို့ ရတာပေါ့လေ ကနြျောတို့ က ငပိနျးတှဆေိုတော့..မာဆတျ ကောငျမလေးတှကေိုဘယျလိုရှာရမလညျးဆိုတာ မစဉျးစား တတျကွ ဘူး..ဂြာကွီးက နောကျရကျကတြော့ မနကျဖနျ ၁၀နာရီ မှာ ကောငျမလေးတှေ လာမယျ.လူရှေးရမယျ
နောကျတဈနရေ့ောကျတော့ ဟိုတယျကို အလြှိုအလြှိုရောကျလာကွတာ… ကောငျမလေး ၁၀ ယောကျလောကျ ပေါ့..ထိုငျစောငျ့ခိုငျးတားပွီး ဂြာကွီးအခနျးထဲ ကိုအလှညျ့ကလြှတျရတာပေါ့..လာတဲ့ကောငျမလေးတှကေို ကွညျ့လိုကျ… စိတျထဲကပဈမှားလိုကျနဲ့ပေါ့… ကောငျမလေးတှထေဲက ပုံမလာပနျးမလာ ၂ ယောကျလောကျကိုမရှေးဘဲနဲ့ ကောငျမလေး ၈ ယောကျကိုရှေးလိုကျ တယျလို့သိရတယျ,, ကနျြတဲ့ကောငျမလေးတှကေ အလုပျခနျ့ထားလို့ ဟိုတယျမှာနရေတယျ.. မာဆတျကောငျမလေးတှထေဲမှာကနြျောက ပုသိမျကလာတဲ့ အေးအေးခိုငျကိုစိတျဝငျစားမိသလို…နိုငျဝငျးကလညျး ပွညျကလာတဲ့ ကုလားဆငျကောငျမလေး ကွညျကွညျ လှငျ ကိုစိတျဝငျစားတယျ.. ကနြျောတို့ နှဈယောကျက အဲအခြိနျမှာ.. အပွငျမှာ ကောငျမလေးတှနေဲ့အတူတူအိပျပီးဘီ… တဈလတဈခါ လောကျတော့ နဖွေဈတယျ… မဟုတျတာလုပျရငျ ကနြျောကလညျးသူပါမှ လုပျတယျ..သူကလညျးကနြျောပါမှ လေ…
တခါတခါ… ကောငျမလေးတဈယောကျတညျးကို ကနြျောတို့ ၂ ယောကျစလုံးက2in 1 ဆှဲတာလညျး ရှိတယျ… ပွောခငျြတာက နှာထလာရငျ ကနြျောတို့ ၂ ယောကျစလုံးအရှကျကိုမရှိတာ..သူ ကောငျမလေး ကို စားရငျလညျးကနြျောက ဘေးကကွညျ့သလို..ကနြျောကောငျမလေးကိုစားရငျလညျး သူက ဘေးက ကွညျ့ တယျ.. တူတူစားရတဲ့အခါ မရှကျကိုမရှကျတော့တာ..အိပျတဲ့ကောငျမလေးတှကေ လိုငျးတှေ ပါ.. ကိုယျ့ရညျးစားတော့ မဟုတျသေးဘူး…ဒါကွောငျ့လညျး ကနြျောတို့ ၂ ယောကျမရှကျကွတာလို့ထငျတယျ မာဆတျခနျးဖှငျ့မှ ကနြျောတို့ လညျး ရနျကုနျမွို့မှာ ကာမ သောငျးကနျြးသူတှမြေားတယျ..ဆိုတာကနြျောတို့ သိလာ ရတယျ…
လာတဲ့ဧညျ့သညျတှထေဲမှာအသကျကွီးကွီးလူကွီးတှလေညျးပါတယျ..လူလတျပိုငျးတှလေညျးပါတယျ…လာတဲ့လူတိုငျးက မိနျးကလေး က သူတို့ တဈကိုယျလုံးကို နှိပျနယျကာ hand play လုပျတာ ခံခငျြလို့လာတာပါ… ဆကျရှငျတခါက တဈနာရီ ပါ..နှဈဆကျရှငျယူမဲ့သူလညျးရှိပါတယျ… ကနြျောတို့အတှအေ့ကွုံအရ ဆကျရှငျ စပွီး နာရီဝကျကွာရငျ ဇတျလမျးစပွီ.. အဲအခြိနျမှာ ဧညျ့သညျက ထုခိုငျးပီလေ.. အဲအခြိနျခြောငျးရငျ မသိ ကွဘူးလေ… ကနြျောတို့ ဆီက ကောငျမလေးတှအေကုနျလုံး ဧညျ့သညျကို hand play လုပျပေးဘူးကွတာခညျြးဘဲ… ကနြျောတို့ ခြောငျးတာလညျး သူတို့တှသေိကွတယျ..ပထမတော့ စိတျဆိုးကွတယျ.. နောကျပိုငျးကတြော့လဲ အခြောငျးခံရတာ ရိုးသှားကွတယျ… တခါတခါကရြငျ ခပျကွောငျကွောငျဘဲကွီးတှကေို သူတို့ hand play လုပျပေးခဲ့ရတာတှေ… ကပျစေးနညျး ဘဲ နှာဘူးကွီးတှအေကွောငျးကို ကနြျောတို့ ပွောရီတတျကွတယျ.. ကနြျောနဲ့ လညျး အေးအေးခိုငျတို့ ပိုခငျလာ သလို.နိုငျဝငျးကလညျး ကွညျကွညျ လှငျ နဲ့လညျးပိုခငျလာတယျ.. ဒီနရောမှာကနြျောတို့ က လူခငျြးခငျတာဘဲ..သူတို့တှနေတေို့ငျးဧညျ့သညျတှကေို .
hand play လုပျပေးခဲ့ရတာတှေ ကို ကနြျောတို့သိပမေဲ့ ခငျလာတာကွာတော့လညျး.. သူငယျခငျြးတှဆေိုတော့ အထငျသေးတာမြိုးလညျးလုံးဝကို မဖွဈတာ..ကနြျောတို့ဆိုငျမှာဆီလိမျးမာဆတျကိုလုပျတဲ့ ကောငျမ လေး ၁၂ ယောကျလောကျရှိတယျ..ကနြျောတို့ အကုနျကိုခြောငျးဘူးတယျ.. လာတဲ့ ဘဲ ကွီးတိုငျးလိုလိုက လကျနဲ့လုပျပေးတာကိုခံကွတယျ… ဘဲက ရဈတယျ ဆိုရငျ ကနြျောတို့က ကွားဝငျပေးရတာလညျးရှိပမေဲ့နညျးပါတယျ.. ဧညျ့သညျပါးရငျ ကနြျောတို့ထိုငျစကားပွောနတေတျတယျ… ဟိုအကွောငျးဒီအကွောငျး တှပေေါ့… အေးအေးခိုငျနဲ့ ကနြျောကစကားပွောတာမြားတယျ..သူ့အိမျအကွောငျး..သူ့မိသားစုအကွောငျးပေါ့… ကနြျောလညျး သူ့ကိုပိုခငျ လာတယျ..တိုတိုပွောရရငျ ခဈြသူဘဝကို ရောကျခဲ့တယျ…
ကွညျကွညျလှငျနဲ့နိုငျဝငျးလညျး ခဈြသူမဖွဈသေးပမေဲ့ တျောတျောကို တှဲဖွဈတယျလို့ပွောရမယျ.. ခဈြသူဘဝရောကျပမေဲ့ကွညျကွညျလှငျကို ကနြျောမနမျးဘူးသေးဘူး..ကနျြတာကလညျးဘာမှ မလုပျရသေးဘူး.. သခြောတာကတော့သူကအပြိုစဈသေးတယျဆိုတာကိုတော့ကနြျောသိတယျ.. လာတဲ့ဧညျ့သညျတှကေို သူလကျ နဲ့ လုပျပေးတာက တော့မုနျ့ဖိုးရခငျြလို့ဆိုတာ ကနြျောသိတယျ..ထူးဆနျးတာက ကနြျောစိတျထဲ သဝနျတို တာ မြိုး တော့မရှိဘူး..အလုပျသဘောလို့ဘဲ သဘောထားတယျ..ဒါနဲ့နိုငျဝငျးကို ပွောပွတယျ..
ငါ နဲ့ကွညျကွညျနဲ့ ဖွဈနပေီ..သူငယျခငျြး ငါသိတယျ..မငျးတို့ ကို ကွညျ့တာနဲ…မငျးအတညျလား..အပြျောလား… အငျး..အတညျလို့တော့ထငျတာဘဲ…သူနဲ့ငါနဲ့နားလညျမှုရှိတယျ… အငျး…ကွညျကွညျကစိတျထားကောငျးပါတယျ… သဘောကောငျးတယျ…မငျး နဲ့အဆငျပွမှောပါ… အဲနကေ့ သူနဲ့ အေးအေးခိုငျလညျး ခဈြနတေယျဆိုတာသိလိုကျရတယျ.. အေးအေးနဲ့လညျး သူလညျး ပွလေညျမယျ လို့ ထငျပါတယျ သူလညျး အေးအေးခိုငျရော ကွညျကွညျကို ဧညျ့သညျတှကေို လကျနဲ့လုပျတာ ခြောငျးဘူးတာဘဲလေ….ကနြျောတို့ ၂ ယောကျစလုံးက ကိုယျ့ခဈြသူတှကေ တခွားသူတှရေဲ့ငပဲတှကေိုကိုငျပီး လကျနဲ့လုပျပေးရတာကို ဘယျလိုမှ မနဘေူး.. ၂ နှဈလောကျအဲဒီဟိုတယျမှာအလုပျလုပျဖွဈတယျ… ကနြျောက အမဖေ့ကျက အမြိုးတဈယောကျရဲ့ ကြေးဇူး ကွောငျ့ ကားတဈစီးဝယျဖွဈတယျ..တကျဆီ ဆှဲဖွဈတယျ…
နိုငျဝငျးကလညျးကုမ်ပဏီတဈခုမှာ သူဌေးရဲ့ လူယုံ ဖွဈသှားတယျ…သူနဲ့ကနြျောနဲ့ကတော့တှဖွေ့ဈတယျ.ကွညျကွညျနဲ့အေးအေးတို့ကတော့ ဟိုတယျမှာဘဲ ကနျြခဲ့ တယျ.. ကနြျောတို့နှဈယောကျတှရေ့ငျ အိမျထောငျပွုဖို့ကိစ်စလညျးပွောဖွဈတယျ…ခကျတာက ကနြျောတို့နှ ဈယောကျ စလုံးက အိမျတဈလုံးဝယျနိုငျဖို့ကိုပိုကျဆံမရှိကွသေးဘူးလေ..ကွညျကွညျနဲ့ အေးအေးကို လညျး ဟိုတယျမှာ ဆကျမလုပျစခေငျြတော့ဘူး… သူငယျခငျြးနှဈယောကျတိုငျပငျပီးတော့ မွို့စှနျက တိုကျခနျးကဉျြးလေးတဈခု နှဈခြုပျနဲ့.. ငှားဖွဈတယျ.. အိမျဌားခကို တဈယောကျတဈဝကျ ခံတာပေါ့.. အတိုခြုံးပွောရရငျ… ကွညျကွညျနဲ့ ကနြျောနဲ့ လကျထပျ လိုကျ ကွတယျ..နိုငျလငျးကတော့..ကနြျောတို့ယူပီး နောကျတဈလ လောကျမှ လကျထပျဖွဈတယျ
ကနြျော ကွညျကွညျကိုလကျထပျပီး အိမျကိုချေါလာတယျ…တိုကျက ကနျထရိုကျတိုကျ လေ .ဟောခနျးပုံစံပါဘဲ.. ကနြျောတို့ညားခါစ လငျမယားပြျောနတောပေါ့နျော…နိုငျဝငျးက ကနြျောတို့ညားခါစ လငျမယားလှတျလပျအောငျ အပွငျမှာသှားအိပျပေးတယျ..ည၇နာရီလောကျမှာကနြျောက ကွညျကွညျကို နမျးတယျ ..ကွညျကွညျကလညျး ပွနျနမျးတယျ… ပထမဆုံးညမှာ ကနြေျာ့လီးကို စုပျပေး..ကနြျောက သူ့စဖုတျကိုယကျပေး…. အဲညမှာ ကွညျကွညျအပြိုစငျဘဝကို ကနြျော ဖကျြပဈလိုကျတယျ… ကိုယျရတဲ့မိနျးမက အပြိုစဈစဈဆိုတာ သိရတော့ဝမျးသာမိတယျ. . မိနျးမ တဈယောကျနဲ့ အဝတျမပါဘဲ အတူတူအိပျရတာ ကို ကနြေပျမိတယျ… နခေ့ငျးပိုငျးမှာလညျး သူနဲ့ကနြျောဘာအဝတျမှ မဝတျဘဲဖငျပွောငျနဲ့ အိပျရာထဲမှာနကွေတယျ… ကနြော့ဘ၀ မှာ စောကျပတျ ယကျခငျြနတောကွာလှပီ အခုမှဘဲ .ကွညျ့ကွညျ့ကို ယကျပေးရတော့တယျ… သူကလညျး ကနြေျာ့လီးကို မှုတျပေးတယျ..
ကွညျကွညျဘောဒီကို ပွောပွမယျ..အရပျက မနိမျ့မမွငျ့..အသားဖွူတယျ..နို့တှကေ တော့လုံးပီးတငျးနတောဘဲလေ..ဖငျကတော့တောငျ့တယျ…. စဖုတျက တော့ အမှေးထူထူဘဲ…စမွငျခါစ က လနျ့တောငျသှားတယျ…ကနြျောကတော့ပိနျပိနျပါးပါး…. အရပျ ကတော့ မွငျ့တယျလို့ ပွောရမယျ.. ပြျောစရာဘဲ..နိုငျဝငျးပွနျလာတော့လိုးပီးခါစ …အဝတျတောငျမဝတျရသေးဘူး…. တံခါးခေါကျသံကွား တော့… သူကအိပျရာကထ… ပီးဘရာဇီယာဝတျမလို့လုပျတော့ ..မဝတျနဲ့….ဆိုလို့သူမဝတျဘူး.. အိမျနရေငျးစကတျဂါဝနျ အတိုဘဲ ဝတျလိုကျတယျ… နိုငျဝငျးက (မငျးတို့သာယာနကွေတယျမလား…)
(အေး… သာယာတာပေါ့ကှာ…အခုလေးတငျ.. ညစာစားထားတာလေ..ထမငျးတော့မဟုတျဘူး )လို့ပွောတော့ ကွညျကွညျက ရှကျလို့ မကျြနှာရဲနတောဘဲ… ကွညျကွညျက အောကျက ဘရာဇီယာမပါဘူး… စကတျကလညျး မရှညျဘူးဆိုတော့..ကွညျကွညျရဲ့ပေါငျတှေ တဈဝကျလောကျပျေါနတေယျ..ယောကျြားတဈယောကျရှမှေ့ာ ကိုယျ့မိနျးမ ပေါငျတဈဝကျလောကျပျေါနတောကို ကနြျော ဖီလငျလာတယျ..နိုငျဝငျးဆိုတဲ့ကောငျက ငယျပေါငျးဘဲ လေ… မကွညျ့ဘဲဘယျနမှောလညျး..ကနြေျာ့မိနျးမမို့လိုသာ..သူမကွံတာပါ..ကွညျ့တာက တော့ ကွညျ့တောပေါ့ နိုငျဝငျးက အရကျနဲ့ အမွီး ဝယျလာတယျ…ကွညျကွညျကို နိုငျဝငျးက သောကျမလားလို့ ပွောတော့ ကွညျကွညျက ကနြော့မကျြနှာကိုလှမျးကွညျ့သောကျတယျ….နဲနဲသောကျလိုကျလလေို့ ကနြျောကပွောတော့ ကွညျကွညျလညျး သောကျပီးမကျြနှာရှုံမဲ့ပီးသောကျဖွဈတယျ….ပထမ တဈ ခှကျပီးတော့ဒုတိယတခှကျသောကျဖွဈသှားတယျ…
အရကျကလေးဝငျလာတော့စကားဝိုငျးကပိုစိုပွလောတယျ..ပိုရငျးနှီးလာတယျ…ကွညျကွညျနဲ့ နိုငျဝငျးလဲ..စလိုကျ နောကျလိုကျပွောငျလိုကျပေါ့… နိုငျဝငျးကလညျးမူးလာတယျ…(ကွညျကွညျ..စိတျမဆိုးနဲ့..နငျဟိုတယျမှာ လုပျတုနျးကနငျ့ယောကြားနဲ့ငါ နငျ့ကိုခြောငျးကွညျ့ဘူးတယျဟ) (ကိုနိုငျဝငျးကလညျး..တျောတျောဆိုးတာဘဲနျော..) ကွညျကွညျက ရီပွီး ပွောသာပွောနရေတာ.. မကျြနှာကိုနီရဲနတောဘဲ နိုငျဝငျးဘာကိုဆိုလိုမှနျးကနြျောလညျးသိတယျ…ကွညျကွညျလဲသိတယျ… ရီကွ..မောကွနဲ့ ကနြျောတို့ ညပိုငျးကုနျသှားတယျ…ကွညျကွညျကတော့တျောတော့ကိုမူးလာတယျ… ……
နောကျနမေ့နကျကတြော့ ကနြျောနိုးလာတယျ.. ကွညျကွညျကလညျးဘေးမှာအိပျနတေုနျး.. ကွညျကွညျကိုဖကျပီးကနြျော ကနမျးလိုကျတယျ…ကွညျကွညျကလညျးပွနျနမျးတယျ…. သူ့နို့ ကလေးတှေ ကိုငျလိုကျတာနဲ့ ကနြျောလညျးလီးတောငျလာတယျ… ကနြျောလီးကိုသူက ကိုငျထားတော့. ကနြေျာ့လီး တောငျလာတာကိုသူကသိတယျ…စဖုတျကိုလကျနဲ့စမျးလိုကျတော့စိုနတေယျ..
ကနြျောသူ့အပျေါတကျခှတော့ သူက နိုငျဝငျးရှိတယျလို့ မေးငေါ့ပွတယျ…ကနြျောက မသိခငျြယောငျဆောငျပီး သူ့ကိုဆကျခှတယျ..သူ့စကတျကိုလှနျတယျ..သူကရုနျးတယျ…ရုနျးပမေဲ့ ကနြော့အားကို မရဘူးလေ.. အသံမထှကျအောငျရုနျးရငျးနဲ့ သူ့စဖုတျထဲကိုကနြော့လီးက ဝငျသှားပီ.. ဆယျခကျြလောကျစောငျ့လိုကျတော့ သူမရုနျးတော့ဘူး..ကနြော့လိုးတာကို အားရပါးရခံနပေီ…ကြ နျောက ကနြော့ပုဆိုးကိုခြှတျလိုကျပီး အားရပါးရလိုးတော့တာဘဲ..အဲအခြိနျကနြော့စိတျထဲမှနျနပေီ… ကွညျကွညျကလညျး ကနြော့ လုပျတာကို ဖီးတကျနပေီ…သူ့စကတျကို ခြှတျ တော့ရုနျးသေးတယျ….ကနြျောအတငျးခြှတျပီး အဝေးကို လှငျ့ပဈလိုကျတယျ… ကနြော့မိနျးမကို နိုငျလငျးအိပျနတေဲ့ဘေးမှာ ဖငျပွောငျလိုးနပေီ… ကွညျကွညျက နိုငျလငျးအိပျတာကိုနိုးသှားမှာ စိုးတယျနဲ့တူပါရဲ့…အလိုးခံရငျး နဲ့နိုငျလငျးနိုးမနိုးကို လှမျးကွညျ့တယျ..
ကနြျောကတော့ဒါကို မသိတော့ဘူး.. လူကလညျးမှနျနပေီလေ အခုအခြိနျသာ နိုငျလငျးနိုးလာရငျ ကွညျကွညျကိုကနြျောလိုးနတောကို တှမှေ့ာဘဲ..ကွညျကွညျဖငျကိုကော..စဖုတျကိုရော..ကနြေျာ့လီးဝငျနတောကို အတိုငျးသာ မွငျမှာဘဲလေ နောကျဆုံးတော့…. ကွညျကွညျသာပီးသှားတယျ..နိုငျလငျးကတော့မနိုးဘူး..ကွညျကွညျလညျး အဲတော့မှစိတျသကျသာရသှားတယျ… နောကျပိုငျး ကနြျောတို့ လငျမယား လိုးကွတယျ..ညဆိုရငျအသလေိုးတယျ..အရှကျတှလေညျးကုနျ လာကွတယျ… ကနြျောအံ့သွတာက ကွညျကွညျက လိငျကိစ်စကိုအရမျးစိတျပါတယျ.. ရမကျထနျတယျ ဆိုတာအရငျက မသိထား ဘူး… … ကွညျကွညျကလညျး ကနြျောလိုးခငျြတာနဲ့ အဆငျသငျ့ဘဲ… နဲနဲနမျးလိုကျတာနဲ့ စိတျပါလာတာမြားတယျ ကွညျ ကွညျဒီလောကျထနျမဲ့မိနျးမလို့ကနြျောမထငျထားဘူး…ကနြျောတို့လညျး တဈ ယောကျကိုတဈ ယောကျပိုခဈြလာတယျ..အရှကျဆိုတာ ဘာလညျးလို့တောငျမေးရမဲ့ အခွအေနကေိုတောငျရောကျလာတယျ…
တဈနကွေ့ညျကွညျကိုကနြျောလိုးနတေုနျး …. ကွညျကွညျက ကနြေျာ့ကိုမေးတယျ.. (အကို..ကွညျအရငျက လကျနဲ့သူမြားဟာတှေ လုပျပေးတာ အကိုသိတယျ နျော…) (သိတယျလေ..အကိုနဲ့နိုငျဝငျးတောငျခြောငျးဘူးတယျ.). (အငျး…..အကို စိတျထဲ ရှံနမှောစိုးလို့ ..စိတျမသနျ့ ဖွဈမှာအရမျးစိုးရိမျတာလေ) (မရှံဘူး…).. (အငျး…..) (မှုတျပေးဘူးလား..သူတို့ကို) ကွညျကွညျပွနျမဖွဘေဲငွိမျကသြှားတယျ…. ကနျြောထပျမေးတယျ… (မှုတျပေးဘူးလား ) ကွညျကွညျမဖွဘေူး… ငွိမျနတေယျ.. ကနြျောဆကျလိုးနတေယျ.. လီးကိုသူ့စဖုတျထဲသှငျးနတေယျ.. (အကိုသိခငျြတယျကှာ….) လို့ ထပျပွောလိုကျမှ (အငျး…..) လို့အသံတိုးတိုးလေးပွနျဖွတေယျ…. ထူးဆနျးတာက ကနြေ့ာမိနျးမ က သူမြားလီးကို ကိုငျဘူးတာ… မှုတျပေးတာ ပွောတာ. .ကနြေျာ့ရငျထဲ..ခံစားခကျြတဈမြိုး..ဖိနျးတိနျးတိနျး… လီးထဲကို သှေးပို ရောကျလို့လားမသိဘူး… ပိုကွီးလာတယျ..လီးကပိုမာ..ပိုကွီးလာတယျ
(အငျး..အကို စိတျဆိုးသှားပလား) (မဆိုးဘူး………….) ကနြျောလိုးတာပိုမွနျလာတယျ…ကွညျကွညျလဲပိုခံစားနတေယျ.. (မှုတျပေးဘူးလား …..)(အငျး….) (မှုတျပေးဘူးလား… အငျးလို့မပွောနဲ…..) (မှုတျပေးဘူးတယျ…) (အိုး………………..) (မှုတျပေးဘူးလား…) (မှုတျပေးဘူးတယျ….) (ထပျပွော..ကွားခငျြတယျ….သူမြားလီးတှကေိုမှုတျပေးဘူးလား) (မှုတျပေးဘူးတယျ…) သူမြားလီးတှကေိုမှုတျပေးခဲ့တဲ့ကနြေျာ့မိနျးမနှုပျခနျးတှကေိုနမျးမိတယျ..(ခဈြတယျ…ကှာ…. ကွညျကိုခဈြတယျကှာ..) (အကို့ကိုလညျးကွညျခဈြတယျ…)အဲနကေ့ ကနြျောအရမျးလိုးသလို ကွညျလညျး ပီးတာ ၃ ခါတငျေပွီးတယျ…
ကနြျောက ကနြော့မိနျးမကို ဘာဝတျဝတျ ကနြေပျတယျ..အဖှားကွီးလေးလို မဝတျရငျပီးရောလေ တကျဆီလေးဆှဲတာကလညျး အဆငျပွတေယျ..ကိုယျ့ကားဆိုတော့လညျး နငျးကနျမ မောငျးပါဘူး.. ညပိုငျး တကျဆီဆှဲရငျလညျး ကွညျကွညျလညျး ပငျြးလို့ဆိုလိုကျစီးတဲ့အခါလညျးစီးတယျ…အဲအခါမြိုးဆို လူကွညျ့လိုကျတာပါ..မသငျကာစရာ ပုံစံမြိုးဆိုရငျ.. မလိုကျတော့ဘူး..ကွညျကွညျကလညျးပါလာ တေ့ာ သတိထားရတာပေါ့…
ကနြျောက အကွံနဲ့ ကွညျကွညျကိုချေါတာလေ..အိမျမှာကတော့ နရောမြိုးစုံမှာလိုးပီး ဘီ.. ရခြေိုးခနျးထဲမှာလညျးလိုးတယျ… မီးဖိုခြောငျထဲမှာလညျးလိုးတယျ. .ကားပျေါမှာမလိုးရသေးဘူး.. ကားထဲမှာလိုးဘူးခငျြတယျ..စိတျက လေ… ခရီးသညျလိုကျပို့ပီး အပွနျမှာ အရမျးမှောငျတဲ့ ကြောကျကုနျးဘကျ က လမျး တဈလမျးဘကျ ကို ကားကိုမောငျးလိုကျတယျ… သဈပငျအောကျမှာကားရပျလိုကျတော့.. ကွညျကဘာလို့ရပျတာလညျးအကိုလို့ မေးတော့ ဘာမှ မပွောဘဲ သူ့ကိုစနမျးလိုကျတယျ..သူက လညျးပွနျနမျးတယျလေ Crd; Lin
သူငယျခငျြး (၂) ယောကျ အခနျး ( ၂) (ဖွဈရပျမှနျကိုအခွခေံစိတျကူးပုံရိပျဖျောထားသညျ)
ကနြျောနမျးတာကို ပွနျနမျးတယျ.. (အကိုရယျသူမြားတှေ မွငျကုနျမယျ ကှာ) လို့ ပွောပမေဲ့ ကနြျော ကတော့ မုနျယိုနပေီလေ… ကနြျောက စိတျတှကေ ထနျနပေီ…နမျးတာမှ အိမျမှာနမျးတာထကျကိုပို ဖီးလာ တယျ.. မိနျးမရဲ့ ပုခုံး..လညျပငျး နားရှကျတှကေို အကုနျ နမျးတာ လေ.. ကွညျကွညျဆီက ညညျးသံလေး တှကွေားရတယျ..(အကိုရယျ….အငျး…………………..) လို့ဘဲ ညညျးရငျး ကနြေျာ့ကို ပွနျနမျးနတော…ကနြျောက နမျးလညျးနမျး…. ဘေးကိုလညျးကွညျ့… ပေါ့.. လူရှငျးနတေဲ့ အမှောငျလမျးထဲမှာ ကိုယျ့မိနျးမကို ကိုယျ နမျးရတာ က အိမျမှာနမျးရတဲ့ ဖီလငျမြိုးမဟုတျဘူး….မတူဘူး…ဗြ… အရမျးကောငျးနတေယျ…(စာဖတျသူမြား အဲလိုကိုယျ့မိနျးမကို အမှောငျလမျးမှာနမျးဘူးရငျ ကနြော့ကို မနျ့ပေးခဲ့ကွပါ..ကနြေျာ့ခံစားခကျြနဲ့တူလားသိခငျြပါတယျ)
ကနြျောလကျတှကေလညျး ကွညျ့ကွညျ့ရဲ့နို့တှဆေီကို အလိုလိုရောကျသှားတယျ…နို့ကိုနယျ..နို့သီးလေး တှကေို ပှတျပေး…နမျး …လူတဈယောကျထဲ အလုပျကိုမြားနေ တာပေါ့ (အကိုရယျ…အိမျကမြှ ကှာ….. အိမျကမြှ အတူတူကဲမယျကှာ) …ကွညျကွညျ က ပွောနပေမေဲ့မုနျ ယိုနတေဲ့ ကနြျောက တော့ သူဘရာဇီယာကိုခြှတျလိုကျပီ.. သူမှာ အပျေါက တီရှပျဘဲရှိတော့တယျ… (ကွညျ ..အနောကျခနျးသှားရအောငျ) လို့ကနြျောက ပွောလိုကျတယျ…(အကိုရယျ…လမျးမကွီးမှာ ..ခကျတော့တာဘဲ…သူမြားတှမွေငျကုနျမယျ….) လို့သာပွောပမေဲ့.ကားရှခေ့နျးကနေ ဆငျးပွီးနောကျခနျးကိုသှားတော့ ကနြျောလညျးနောကျခနျးကို ဝငျလိုကျတယျ…နောကျခနျးမှာ နမျးနတော အကွာကွီးဘဲ..နမျးနရေငျးနဲ့ သူ့လကျ က ကနြော့လီးကိုလာကိုငျတယျ..လီးက မကိုငျခငျထဲက မာတောငျနတော… ကနြော့လီးမာတောငျနတောကို သိလိုကျတော့… ကွညျကွညျပါးစပျက
“အိုး…………………..အကိုရယျ……………”လို့တောငျအသံထှကျတယျ…ကနြျော သူ့စကတျကိုလှနျပီး ဘောငျးဘီကိုခြှတျလိုကျပီး ယကျတော့တာဘဲ…အရညျတှစေိုနပေီ..စဖုတျက… ကနြေျာ့အရမျးယကျတော့သူ့ပါးစပျက ညညျးနပေီ…သူအရမျးကောငျးတာ ကနြျောသိနပေီ ကနြေျာ့ လီးထုတျပီး လီးကို သှငျးလိုကျတာနဲ့ ကနြေပျအားရတဲ့အသံ ကွညျကွညျဆီက ကွားရ တယျ…. ကနြျောလိုးတာ ၁၅ မိနဈလောကျကွာတော့ ကွညျကွညျပီးသှားဘီ ..ကနြေျာ့ မပီးသေးဘူး… ကွညျကွညျလညျး တျောတျောမောသှားတယျ… အားရကနြေပျတဲ့မကျြနှာနဲ့ပေါ့… ကနြျောလညျး မပွီးပမေဲ့ကားပျေါမှာလိုးလိုကျရလို့ ကနြေပျသှားတယျ..အခြိနျကလညျး ၁၁ နာရီကြျောပီဆိုတော့အိမျကိုဘဲကားမောငျးလာမိတယျ… မိနျးမဘရာဇီယာက တော့ကတြော့ ကားရှခေ့နျးမှာ…ကနြော့ထိုငျခုံမှာရှိနတောပေါ့.. မိနျးမ က တီရှပျနဲ့ စကတျဘဲဝတျထားတယျ.. အတှငျးခံဘောငျးဘီကလညျး ပွနျမဝတျရသေးဘူးပေါ့..ကားနောကျခနျးမှာဘဲလေ….ကွညျကွညျကတော့မောလို့လားမသိဘူး…အိပျပြျောနတေယျ….ကနြျောက လညျးမနိုးတော့ဘူး….
ကားကိုအိမျဖကျကို မောငျးလာခဲ့တယျ…တာမှေ ဗိုလျစိနျမှနျလမျးဖကျကိုခြိုးလိုကျတော့… ညလုံးပေါကျဖှငျ့တဲ့ ABC Store ဆိုငျနားကိုရောကျတော့… ကျောဖီမဈအိမျမှာကုနျနတောကို သတိရလို့ ဝယျမယျဆိုတဲ့ စိတျကူးရတာနဲ့ ကားကိုရပျလိုကျတယျ.. အဲအခြိနျမှာ ကွညျကွညျလညျးနိုးလာတယျ. “အကို ဘာဝယျမလို့လဲ” “ကျောဖီမဈ…နငျကောဘာဝယျခငျြသေးလဲ… ဝယျခငျြတာရှိရငျလိုကျခဲ့” ကနြျော ကားပျေါက ဆငျးပီးစတိုးဆိုငျထဲကိုဝငျသှားတယျ.. ဆိုငျထဲမှာ အရောငျးဝနျထမျး အမြိုးသား ၂ ယောကျရှိတယျ..ကနြျော လညျးကျောဖီရှာပီး ပိုကျဆံရှငျးမလို့ကောငျတာကိုသှားတော့…ဆိုငျထဲကို ကွညျကွညျဝငျလာတယျ…ဝနျထမျး ၂ ယောကျရဲ့မကျြလုံးတှကေ ကနြေျာ့ဆီက နေ ကွညျကွညျဆီကို လှမျးကွညျ့ လိုကျတယျ..ကနြျောလညျး လှမျးကွညျ့မိတယျ…
ကွညျကွညျက ကားပျေါမှာ သူ့ဘရာဇီယာကို ကနြျောခြှတျထားတော့ တီရှပျအောကျမှာဘရာဇီယာမပါတော့ဘူး…. အောကျက ဘာမှ မပါတဲ့ တီရှပျဝတျထားတဲ့ မိနျးက လေးတှကေို မွငျဘူးမှာပေါ့…နို့ ၂လုံးက အောကျကဘာမှ မထိနျးထား တော့လှုပျလှုပျ လှုပျလှုပျနဲ့လေ…ရငျသားတှကေ တငျးရငျးနတေော့… လှပတဲ့ မွငျကှငျး ကလေးပေါ့ ဝနျထမျး ၂ ယောကျရဲ့မကျြလုံးတှကေ ကွညျကွညျမွငျတာနဲ့ အရောငျတှလေငျးလကျသှားတယျ..ကနြော့မိနျးမမှနျးမသိကွဘူး…ထငျတယျ…ကနြျောတောငျ ကွညျကွညျ ကိုယျ့မိနျးမကို ပဈမှားခငျြစိတျ တဖှားဖှားပေါကျလာအောငျ ဆကျစီဖွဈလှနျးတယျ…နို့သီးရာ လေးတှေ ထငျးနတေဲ့ တီရှပျ နဲ့မိနျးမကိုပွေးနမျးခငျြလောကျအောငျကို ကနြျောခံစားရတယျ..
ဆိုငျဝနျထမျးတှေ ဘယျလိုခံစားဖီးတကျနမေယျမသိဘူး..ကနြော့မိနျးမကို တခွား ယောကျြားတှေ ပဈမှား ကွတာ…ကွညျ့နတောကို ကနြျောဖီးလာလိုကျတာ…ကွညျကွညျက ကနြျောတို့ ယောကြား တှေ ဖွဈနတေဲ့ ဖီလငျကို သိမယျမထငျဘူး….ကွညျကွညျက သူဝယျခငျြတဲ့ စားစရာတှရှေေးနတေယျ… ကနြျောက ကွညျကွညျဆီကိုလိုကျသှားတယျ…. “ကွညျကွညျ..နငျ့ကို ဟိုကောငျ၂ ကောငျ ပဈမှားနတောသိဘူးလား….. လို့ တိုးတိုးလေး သှားပွောလိုကျတယျ….ကွညျကွညျလညျး ရှကျသှားပုံရတယျ…”အကိုရယျ… သိသာနလေား” လို့ မကျြနှာရဲပီး ရှကျရှကျနဲ့ပွနျမေးတယျ..အဲအနားမှာ မှနျတဈခပျြနံရံမှာခြိတျထားတယျ… ကနြေျာ့က မှနျထဲမှာကွညျ့လိုကျလို့ ပွောတော့ ကွညျကွညျ လဲ မှနျထဲကိုလှမျးကွညျ့လိုကျတော့နို့သီးရာတှထေငျးနတေဲ့ တီရှပျနဲ့သူပုံကို မွငျလိုကျရတော့…
“စိတျညဈလိုကျတာအကိုရယျ…သပေါပီ” “ဘာခုမှ စိတျညဈမနနေဲ့…ဘာမှ မဖွဈသလိုနလေိုကျတော့…ဟိုကောငျတှကေ နငျ့ကို ကွညျ့လိုကျတာ.. ပဈမှားနတော..ငါ့ကိုနငျ့ယောကြားမှနျးမသိဘူးထငျတယျ…” မိနျးကလေးတှရေဲ့သဘာဝကွောငျ့ သူနို့သီးတှထေငျးနတောကို သူ့ရငျဘတျရှမှေ့ာ လကျနဲ့ကှယျလိုကျ တယျ…ကနြျောလညျးကွညျကွညျ့ကို ကွညျ့ရငျးသနားလာတယျ…..တျောတျောရှကျနတောလေ…ရငျထဲမှာ လညျး သာယာသလို ခံစားနရေ တယျ… ကွညျ..ဘာမှ မဖွဈသလိုနေ…လကျနဲ့လညျးကာမနနေဲ့… သှားကွမယျ..”ကနြျော က ကွညျကွညျကိုပွောရငျးသူ့ခါးကိုဖကျလိုကျတယျ…အမှနျက တော့ခါး အောကျပိုငျးတငျပါးအပျေါပိုငျးကို ပါ…ပိုငျစိုးပိုငျနငျးဖကျလိုကျတာ..ဆိုငျဝနျထမျးတှေ မွငျအောငျကို ဖကျလိုကျတယျ…
စိတျထဲက မငျးတို့ ပဈမှားနတေဲ့အိုး လှလှ လေးကို ငါစိတျတိုငျးကြ စားနတောကို မငျးတို့ မွငျအောငျကှလို့တောငျ ပွောမိသေးတယျ… နို့သီးအရာတှထေငျးနတေဲ့တီရှပျကိုလကျနဲ့မကာတော့ဘဲ ရှကျရှကျနဲ့ ဆိုငျကောငျတာမှာ ပိုကျဆံရှငျးနတေဲ့ ကိုယျ့မိနျးမကို ကိုယျခဈြလိုကျတာ..ဆိုငျဝနျထမျး ၂ ယောကျစလုံးကတော့ ကွညျကွညျရဲ့ နို့တှကေို မကွညျ့ဘဲမနနေိုငျဘဲ ကွညျ့နကွေလရေဲ့..ကိုယျ့မိနျးမရဲ့ ရငျသားအလှ လေးတှကေို ပွလိုကျရတဲ့ကနြောက တော့ ဒီနအေ့ဖွဈက နောငျ ကာမပငျလယျရယေဉျကွောမှာ ကနြျောတို့နှဈယောကျ မွောပါတော့မဲ့အစ ဆိုတာအဲတုနျးက မတှေးမိခဲ့ပါခငျဗြား Crd;
ကျနော်တို့ သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ပါ… စနေသား နှစ်ယောက် ပါ… ကျနော်က ထွန်းထွန်း သူငယ်ချင်းက နိုင်ဝင်းပါ တစ်ရပ်ကွက်တည်း တွင် ကြီးပျင်းခဲ့သူများ ငယ်သူငယ်ချင်းများ ဖြစ်ပါသည်။ ကျောင်းပြေးလည်းတူတူ.. ရန်ဖြစ်လည်းတစ် ယောက်နှင့်ရန်ဖြစ်သူကို တစ်ယောက်ကဝိုင်းချ ခဲ့လောက်အောင် ကျနော်တို့ ခင်မင်ကြသည်။ သူက ငယ်ငယ်ထဲက မိန်းမ များကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ ကောင် ပါ…သူ့ ကြောင့်ကျနော်လည်း မိန်းမများကို စိတ်ဝင်စား တတ်လာ သည်… တခါတခါ ကျနော်တို့နှစ် ယောက် ဘေးအိမ်က မိန်းမများရေချိုးသည်ကို တူတူချောင်း ကြသည်..ကောင်မလေးများ မိန်းမ များကို တူတူပစ်မှားကြသည်။ မိန်းမများအကြောင်းတူတူ အားပါးတရ ပြောတတ်ကြသည်။ ကျနော်တို့ ပစ်မှားသည့်မိန်းမများတွင် လင်ရှိမိန်းမများ… ကလေးအမေများ လည်းပါသည်။
ကျနော်တို့မိဘများက အစိုးရဝန်ထမ်းများဖြစ်ကြသည်… ငွေကြေးအားဖြင့် မချမ်းသာကြ ပါ.. ဒါကြောင့်လည်း အသက် ၁၈ နှစ်မပြည့်မှီမှာပင် ကျနော်တို့ ပညာရေးကိုစွန့်ခွာခဲ့ကြပါသည်.. ရန်ကုန်မြို့က ဟော်တယ် တစ်ခုတွင် အတူတူပင်အလုပ်ရကြပါသည်။ ဟိုတယ်မှာပင်နေသည်..ကျနော်တို့ ၂ ယောက်မှာ ဝန်ထမ်းများထဲတွင် အငယ်ဆုံး ဖြစ် သဖြင့်အားလုံးကို လေးစားစွာဆက်ဆံရပါသည်… မျက်စိသူငယ်နားသူငယ်နှင့်အလုပ်ထဲကိုရောက်လာသူ များ ဖြစ်သည့်အတွက် အားလုံးကို သင်ယူကြရပါသည်… အရင် က ဟိုတယ်ဆိုသည်မှာ ဘာမှန်းမသိခဲ့ သူ ကျနော်တို့ သူငယ်ချင်း နှစ်ယောက် တဖြေးဖြေးချင်း လုပ်ငန်းတွေကိုနားလည်လာခဲ့သည်။ ဟိုတယ်မှာအသားကျလာတယ်… ဟိုတယ်မှာလုပ်တဲ့သူတိုင်းက တခြား အလုပ်တွေမှာလုပ်တဲ့သူတွေထက် မိန်းမ- ယောကျားတွေအကြောင်း ကို ပိုသိကြပါတယ်..မိန်းမဆိုတာ ဟိုတယ် လုပ်ငန်းနဲ့မပတ်သက် လို့ကိုမရဘူးလေ… အလုပ်တွေကိုနားလည်သလို မိန်းမတွေကိုပိုစိတ်ပါဝင်စားလာခဲ့သည်…ခန အချိန်ပိုင်းလာတည်းသူစုံတွဲများ..
ကိုလည်းတွေ့ ရင် အားကျ ကာ စိတ်ထဲအကြီးအကျယ်ပစ်မှားတတ်လာသည်..ကျနော်ကလည်း ကျနော် ပစ်မှားသည့် ဆော်များကိုလည်း နိုင်ဝင်းအားပြောပြတတ်သလို..နိုင်ဝင်းကလည်းသူစိတ်ထန်သည့်မိန်းမ များ ကိုလည်း ကျနော့ကို ပြောပြတတ်သည်… ဟိုတယ်ကလည်းနေစရာပေးသဖြင့်ကျနော်တို့နှစ်ယောက်စလုံးအိမ်မပြန်ကြတော့..အမေ့ကိုတော့လခ ပေးသည့်အချိန်က လွဲ၍ မပြန်ကြဘဲ အလုပ်မှာပျော်နေကြသည်။ ဟိုတယ်မှာလည်း သူငယ်ချင်းများရလာပါတယ်. တစ်ရက် မန်နေဂျာကြီး မှ ကျနော်တို့ နှစ် ယောက်ကိုခေါ်သဖြင့် သူ့ရုံးခန်းသို့သွားရသည်…သူဌေးလည်း ရောက်နှင့် နေသည်ကိုတွေ့ရသည်။ သူဌေးမှာ မြန်မာပြည်မွေးတရုပ်လူမျိုး ဖြစ်ပါသည်။ သူမျက်နှာထားကို ကြည့်လိုက်ရတာနဲ့ အားလုံးက ကြောက်ရ မည့် ရုပ်ရည်မျိုးဖြစ်ပါသည်။
မင်းတို့ကို ယုံကြည်စိတ်ချလို့ အခု မာဆတ်၂ခန်းမှာအလုပ်ခိုင်းမယ်.. လို့ ဂျာကြီးက စပြောပါတယ်.. ဟုတ်ကဲ့..ရပါတယ် ကျနော်တို့ ၂ ယောက် တစ်ယောက်မျက်နှာတစ်ယောက်ကြည့်လိုက်ကြပါတယ်..ကျနော်တို့ ဟိုတယ်မှာက အတွဲ တွေလည်းလာကြတာများတယ်..အချိန်ပိုင်းအတွဲတွေ ဆိုတာ ခနခန လာလွန်းလို့ ကျနော်တို့ အားကျခဲ့ရတာ တွေ …ကိုယ်လည်းအဲလို ကာမအရသာခံစားမယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ဆန္ဒတွေကို မနည်းထိန်းနေရတဲ့ ကျနော်တို့ စိတ်ထဲ လန့်သွားမိပါတယ်..ရင်လည်းခုန်လာပါတယ်..
ဒီလိုနဲ့ ကျနော်တို့လည်း ဟိုတယ်မှာ ဆီလိမ်းမာဆတ်အခန်းဖွင့်ဖို့လိုတာတွေ လုပ်ပေးရင်းနှင့် တစ်လ လောက်ကြာ သွားပါတယ်..ဟိုတယ်က ၇ ထပ်ဆိုတော့ ၅ ထပ်မှာအဲလို အခန်း ၁၀ ခန်းယူလိုက်ပါတယ်… ဟိုတယ်ဆိုတာ အခန်းက အမြဲလိုလို ပိုနေတာဆိုတော့ အခန်းလွတ်မထားတဲ့ သူဌေးကိုလည်း စိတ်က ချီးကျူးမိပါတယ်.. ဆီလိမ်းမာဆတ်ဆိုတာသိကြမှာပါနော်… ဧည့်သည်က.ခါးမှာ ပုဝါဘဲပတ်ထားရတယ်… ဆီနဲ့လိမ်းပေးတာလေ တစ်ကိုယ်လုံးကို ..ယုယုယယနဲ့ ပေါ့နော်.. အသာအယာလေး နှိပ်ပေးရတယ် မာဆတ်ခန်းက ထူးခြားတာက တံခါးမှာ အတွင်းကိုကြည့်နိုင်တဲ့အပေါက် တွေပါတယ်..အထဲက ဘာဖြစ်နေ တယ် ဆိုတာ အပြင်က လာကြည့်နိုင်တာအောင်လုပ်ထားတာပါ…နောက်ပိုင်းကျနော်တို့ အတွက် ချောင်းကြည့်လို့ ရတာပေါ့လေ ကျနော်တို့ က ငပိန်းတွေဆိုတော့..မာဆတ် ကောင်မလေးတွေကိုဘယ်လိုရှာရမလည်းဆိုတာ မစဉ်းစား တတ်ကြ ဘူး..ဂျာကြီးက နောက်ရက်ကျတော့ မနက်ဖန် ၁၀နာရီ မှာ ကောင်မလေးတွေ လာမယ်.လူရွေးရမယ်
နောက်တစ်နေ့ရောက်တော့ ဟိုတယ်ကို အလျှိုအလျှိုရောက်လာကြတာ… ကောင်မလေး ၁၀ ယောက်လောက် ပေါ့..ထိုင်စောင့်ခိုင်းတားပြီး ဂျာကြီးအခန်းထဲ ကိုအလှည့်ကျလွတ်ရတာပေါ့..လာတဲ့ကောင်မလေးတွေကို ကြည့်လိုက်… စိတ်ထဲကပစ်မှားလိုက်နဲ့ပေါ့… ကောင်မလေးတွေထဲက ပုံမလာပန်းမလာ ၂ ယောက်လောက်ကိုမရွေးဘဲနဲ့ ကောင်မလေး ၈ ယောက်ကိုရွေးလိုက် တယ်လို့သိရတယ်,, ကျန်တဲ့ကောင်မလေးတွေက အလုပ်ခန့်ထားလို့ ဟိုတယ်မှာနေရတယ်.. မာဆတ်ကောင်မလေးတွေထဲမှာကျနော်က ပုသိမ်ကလာတဲ့ အေးအေးခိုင်ကိုစိတ်ဝင်စားမိသလို…နိုင်ဝင်းကလည်း ပြည်ကလာတဲ့ ကုလားဆင်ကောင်မလေး ကြည်ကြည် လွင် ကိုစိတ်ဝင်စားတယ်.. ကျနော်တို့ နှစ်ယောက်က အဲအချိန်မှာ.. အပြင်မှာ ကောင်မလေးတွေနဲ့အတူတူအိပ်ပီးဘီ… တစ်လတစ်ခါ လောက်တော့ နေဖြစ်တယ်… မဟုတ်တာလုပ်ရင် ကျနော်ကလည်းသူပါမှ လုပ်တယ်..သူကလည်းကျနော်ပါမှ လေ…
တခါတခါ… ကောင်မလေးတစ်ယောက်တည်းကို ကျနော်တို့ ၂ ယောက်စလုံးက2in 1 ဆွဲတာလည်း ရှိတယ်… ပြောချင်တာက နှာထလာရင် ကျနော်တို့ ၂ ယောက်စလုံးအရှက်ကိုမရှိတာ..သူ ကောင်မလေး ကို စားရင်လည်းကျနော်က ဘေးကကြည့်သလို..ကျနော်ကောင်မလေးကိုစားရင်လည်း သူက ဘေးက ကြည့် တယ်.. တူတူစားရတဲ့အခါ မရှက်ကိုမရှက်တော့တာ..အိပ်တဲ့ကောင်မလေးတွေက လိုင်းတွေ ပါ.. ကိုယ့်ရည်းစားတော့ မဟုတ်သေးဘူး…ဒါကြောင့်လည်း ကျနော်တို့ ၂ ယောက်မရှက်ကြတာလို့ထင်တယ် မာဆတ်ခန်းဖွင့်မှ ကျနော်တို့ လည်း ရန်ကုန်မြို့မှာ ကာမ သောင်းကျန်းသူတွေများတယ်..ဆိုတာကျနော်တို့ သိလာ ရတယ်…
လာတဲ့ဧည့်သည်တွေထဲမှာအသက်ကြီးကြီးလူကြီးတွေလည်းပါတယ်..လူလတ်ပိုင်းတွေလည်းပါတယ်…လာတဲ့လူတိုင်းက မိန်းကလေး က သူတို့ တစ်ကိုယ်လုံးကို နှိပ်နယ်ကာ hand play လုပ်တာ ခံချင်လို့လာတာပါ… ဆက်ရှင်တခါက တစ်နာရီ ပါ..နှစ်ဆက်ရှင်ယူမဲ့သူလည်းရှိပါတယ်… ကျနော်တို့အတွေ့အကြုံအရ ဆက်ရှင် စပြီး နာရီဝက်ကြာရင် ဇတ်လမ်းစပြီ.. အဲအချိန်မှာ ဧည့်သည်က ထုခိုင်းပီလေ.. အဲအချိန်ချောင်းရင် မသိ ကြဘူးလေ… ကျနော်တို့ ဆီက ကောင်မလေးတွေအကုန်လုံး ဧည့်သည်ကို hand play လုပ်ပေးဘူးကြတာချည်းဘဲ… ကျနော်တို့ ချောင်းတာလည်း သူတို့တွေသိကြတယ်..ပထမတော့ စိတ်ဆိုးကြတယ်.. နောက်ပိုင်းကျတော့လဲ အချောင်းခံရတာ ရိုးသွားကြတယ်… တခါတခါကျရင် ခပ်ကြောင်ကြောင်ဘဲကြီးတွေကို သူတို့ hand play လုပ်ပေးခဲ့ရတာတွေ… ကပ်စေးနည်း ဘဲ နှာဘူးကြီးတွေအကြောင်းကို ကျနော်တို့ ပြောရီတတ်ကြတယ်.. ကျနော်နဲ့ လည်း အေးအေးခိုင်တို့ ပိုခင်လာ သလို.နိုင်ဝင်းကလည်း ကြည်ကြည် လွင် နဲ့လည်းပိုခင်လာတယ်.. ဒီနေရာမှာကျနော်တို့ က လူချင်းခင်တာဘဲ..သူတို့တွေနေ့တိုင်းဧည့်သည်တွေကို .
hand play လုပ်ပေးခဲ့ရတာတွေ ကို ကျနော်တို့သိပေမဲ့ ခင်လာတာကြာတော့လည်း.. သူငယ်ချင်းတွေဆိုတော့ အထင်သေးတာမျိုးလည်းလုံးဝကို မဖြစ်တာ..ကျနော်တို့ဆိုင်မှာဆီလိမ်းမာဆတ်ကိုလုပ်တဲ့ ကောင်မ လေး ၁၂ ယောက်လောက်ရှိတယ်..ကျနော်တို့ အကုန်ကိုချောင်းဘူးတယ်.. လာတဲ့ ဘဲ ကြီးတိုင်းလိုလိုက လက်နဲ့လုပ်ပေးတာကိုခံကြတယ်… ဘဲက ရစ်တယ် ဆိုရင် ကျနော်တို့က ကြားဝင်ပေးရတာလည်းရှိပေမဲ့နည်းပါတယ်.. ဧည့်သည်ပါးရင် ကျနော်တို့ထိုင်စကားပြောနေတတ်တယ်… ဟိုအကြောင်းဒီအကြောင်း တွေပေါ့… အေးအေးခိုင်နဲ့ ကျနော်ကစကားပြောတာများတယ်..သူ့အိမ်အကြောင်း..သူ့မိသားစုအကြောင်းပေါ့… ကျနော်လည်း သူ့ကိုပိုခင် လာတယ်..တိုတိုပြောရရင် ချစ်သူဘဝကို ရောက်ခဲ့တယ်…
ကြည်ကြည်လွင်နဲ့နိုင်ဝင်းလည်း ချစ်သူမဖြစ်သေးပေမဲ့ တော်တော်ကို တွဲဖြစ်တယ်လို့ပြောရမယ်.. ချစ်သူဘဝရောက်ပေမဲ့ကြည်ကြည်လွင်ကို ကျနော်မနမ်းဘူးသေးဘူး..ကျန်တာကလည်းဘာမှ မလုပ်ရသေးဘူး.. သေချာတာကတော့သူကအပျိုစစ်သေးတယ်ဆိုတာကိုတော့ကျနော်သိတယ်.. လာတဲ့ဧည့်သည်တွေကို သူလက် နဲ့ လုပ်ပေးတာက တော့မုန့်ဖိုးရချင်လို့ဆိုတာ ကျနော်သိတယ်..ထူးဆန်းတာက ကျနော်စိတ်ထဲ သဝန်တို တာ မျိုး တော့မရှိဘူး..အလုပ်သဘောလို့ဘဲ သဘောထားတယ်..ဒါနဲ့နိုင်ဝင်းကို ပြောပြတယ်..
ငါ နဲ့ကြည်ကြည်နဲ့ ဖြစ်နေပီ..သူငယ်ချင်း ငါသိတယ်..မင်းတို့ ကို ကြည့်တာနဲ…မင်းအတည်လား..အပျော်လား… အင်း..အတည်လို့တော့ထင်တာဘဲ…သူနဲ့ငါနဲ့နားလည်မှုရှိတယ်… အင်း…ကြည်ကြည်ကစိတ်ထားကောင်းပါတယ်… သဘောကောင်းတယ်…မင်း နဲ့အဆင်ပြေမှာပါ… အဲနေ့က သူနဲ့ အေးအေးခိုင်လည်း ချစ်နေတယ်ဆိုတာသိလိုက်ရတယ်.. အေးအေးနဲ့လည်း သူလည်း ပြေလည်မယ် လို့ ထင်ပါတယ် သူလည်း အေးအေးခိုင်ရော ကြည်ကြည်ကို ဧည့်သည်တွေကို လက်နဲ့လုပ်တာ ချောင်းဘူးတာဘဲလေ….ကျနော်တို့ ၂ ယောက်စလုံးက ကိုယ့်ချစ်သူတွေက တခြားသူတွေရဲ့ငပဲတွေကိုကိုင်ပီး လက်နဲ့လုပ်ပေးရတာကို ဘယ်လိုမှ မနေဘူး.. ၂ နှစ်လောက်အဲဒီဟိုတယ်မှာအလုပ်လုပ်ဖြစ်တယ်… ကျနော်က အမေ့ဖက်က အမျိုးတစ်ယောက်ရဲ့ ကျေးဇူး ကြောင့် ကားတစ်စီးဝယ်ဖြစ်တယ်..တက်ဆီ ဆွဲဖြစ်တယ်…
နိုင်ဝင်းကလည်းကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာ သူဌေးရဲ့ လူယုံ ဖြစ်သွားတယ်…သူနဲ့ကျနော်နဲ့ကတော့တွေ့ဖြစ်တယ်.ကြည်ကြည်နဲ့အေးအေးတို့ကတော့ ဟိုတယ်မှာဘဲ ကျန်ခဲ့ တယ်.. ကျနော်တို့နှစ်ယောက်တွေ့ရင် အိမ်ထောင်ပြုဖို့ကိစ္စလည်းပြောဖြစ်တယ်…ခက်တာက ကျနော်တို့နှ စ်ယောက် စလုံးက အိမ်တစ်လုံးဝယ်နိုင်ဖို့ကိုပိုက်ဆံမရှိကြသေးဘူးလေ..ကြည်ကြည်နဲ့ အေးအေးကို လည်း ဟိုတယ်မှာ ဆက်မလုပ်စေချင်တော့ဘူး… သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်တိုင်ပင်ပီးတော့ မြို့စွန်က တိုက်ခန်းကျဉ်းလေးတစ်ခု နှစ်ချုပ်နဲ့.. ငှားဖြစ်တယ်.. အိမ်ဌားခကို တစ်ယောက်တစ်ဝက် ခံတာပေါ့.. အတိုချုံးပြောရရင်… ကြည်ကြည်နဲ့ ကျနော်နဲ့ လက်ထပ် လိုက် ကြတယ်..နိုင်လင်းကတော့..ကျနော်တို့ယူပီး နောက်တစ်လ လောက်မှ လက်ထပ်ဖြစ်တယ်
ကျနော် ကြည်ကြည်ကိုလက်ထပ်ပီး အိမ်ကိုခေါ်လာတယ်…တိုက်က ကန်ထရိုက်တိုက် လေ .ဟောခန်းပုံစံပါဘဲ.. ကျနော်တို့ညားခါစ လင်မယားပျော်နေတာပေါ့နော်…နိုင်ဝင်းက ကျနော်တို့ညားခါစ လင်မယားလွတ်လပ်အောင် အပြင်မှာသွားအိပ်ပေးတယ်..ည၇နာရီလောက်မှာကျနော်က ကြည်ကြည်ကို နမ်းတယ် ..ကြည်ကြည်ကလည်း ပြန်နမ်းတယ်… ပထမဆုံးညမှာ ကျနော့်လီးကို စုပ်ပေး..ကျနော်က သူ့စဖုတ်ကိုယက်ပေး…. အဲညမှာ ကြည်ကြည်အပျိုစင်ဘဝကို ကျနော် ဖျက်ပစ်လိုက်တယ်… ကိုယ်ရတဲ့မိန်းမက အပျိုစစ်စစ်ဆိုတာ သိရတော့ဝမ်းသာမိတယ်. . မိန်းမ တစ်ယောက်နဲ့ အဝတ်မပါဘဲ အတူတူအိပ်ရတာ ကို ကျေနပ်မိတယ်… နေ့ခင်းပိုင်းမှာလည်း သူနဲ့ကျနော်ဘာအဝတ်မှ မဝတ်ဘဲဖင်ပြောင်နဲ့ အိပ်ရာထဲမှာနေကြတယ်… ကျနော့ဘ၀ မှာ စောက်ပတ် ယက်ချင်နေတာကြာလှပီ အခုမှဘဲ .ကြည့်ကြည့်ကို ယက်ပေးရတော့တယ်… သူကလည်း ကျနော့်လီးကို မှုတ်ပေးတယ်..
ကြည်ကြည်ဘောဒီကို ပြောပြမယ်..အရပ်က မနိမ့်မမြင့်..အသားဖြူတယ်..နို့တွေက တော့လုံးပီးတင်းနေတာဘဲလေ..ဖင်ကတော့တောင့်တယ်…. စဖုတ်က တော့ အမွှေးထူထူဘဲ…စမြင်ခါစ က လန့်တောင်သွားတယ်…ကျနော်ကတော့ပိန်ပိန်ပါးပါး…. အရပ် ကတော့ မြင့်တယ်လို့ ပြောရမယ်.. ပျော်စရာဘဲ..နိုင်ဝင်းပြန်လာတော့လိုးပီးခါစ …အဝတ်တောင်မဝတ်ရသေးဘူး…. တံခါးခေါက်သံကြား တော့… သူကအိပ်ရာကထ… ပီးဘရာဇီယာဝတ်မလို့လုပ်တော့ ..မဝတ်နဲ့….ဆိုလို့သူမဝတ်ဘူး.. အိမ်နေရင်းစကတ်ဂါဝန် အတိုဘဲ ဝတ်လိုက်တယ်… နိုင်ဝင်းက (မင်းတို့သာယာနေကြတယ်မလား…)
(အေး… သာယာတာပေါ့ကွာ…အခုလေးတင်.. ညစာစားထားတာလေ..ထမင်းတော့မဟုတ်ဘူး )လို့ပြောတော့ ကြည်ကြည်က ရှက်လို့ မျက်နှာရဲနေတာဘဲ… ကြည်ကြည်က အောက်က ဘရာဇီယာမပါဘူး… စကတ်ကလည်း မရှည်ဘူးဆိုတော့..ကြည်ကြည်ရဲ့ပေါင်တွေ တစ်ဝက်လောက်ပေါ်နေတယ်..ယောက်ျားတစ်ယောက်ရှေ့မှာ ကိုယ့်မိန်းမ ပေါင်တစ်ဝက်လောက်ပေါ်နေတာကို ကျနော် ဖီလင်လာတယ်..နိုင်ဝင်းဆိုတဲ့ကောင်က ငယ်ပေါင်းဘဲ လေ… မကြည့်ဘဲဘယ်နေမှာလည်း..ကျနော့်မိန်းမမို့လိုသာ..သူမကြံတာပါ..ကြည့်တာက တော့ ကြည့်တောပေါ့ နိုင်ဝင်းက အရက်နဲ့ အမြီး ဝယ်လာတယ်…ကြည်ကြည်ကို နိုင်ဝင်းက သောက်မလားလို့ ပြောတော့ ကြည်ကြည်က ကျနော့မျက်နှာကိုလှမ်းကြည့်သောက်တယ်….နဲနဲသောက်လိုက်လေလို့ ကျနော်ကပြောတော့ ကြည်ကြည်လည်း သောက်ပီးမျက်နှာရှုံမဲ့ပီးသောက်ဖြစ်တယ်….ပထမ တစ် ခွက်ပီးတော့ဒုတိယတခွက်သောက်ဖြစ်သွားတယ်…
အရက်ကလေးဝင်လာတော့စကားဝိုင်းကပိုစိုပြေလာတယ်..ပိုရင်းနှီးလာတယ်…ကြည်ကြည်နဲ့ နိုင်ဝင်းလဲ..စလိုက် နောက်လိုက်ပြောင်လိုက်ပေါ့… နိုင်ဝင်းကလည်းမူးလာတယ်…(ကြည်ကြည်..စိတ်မဆိုးနဲ့..နင်ဟိုတယ်မှာ လုပ်တုန်းကနင့်ယောကျားနဲ့ငါ နင့်ကိုချောင်းကြည့်ဘူးတယ်ဟ) (ကိုနိုင်ဝင်းကလည်း..တော်တော်ဆိုးတာဘဲနော်..) ကြည်ကြည်က ရီပြီး ပြောသာပြောနေရတာ.. မျက်နှာကိုနီရဲနေတာဘဲ နိုင်ဝင်းဘာကိုဆိုလိုမှန်းကျနော်လည်းသိတယ်…ကြည်ကြည်လဲသိတယ်… ရီကြ..မောကြနဲ့ ကျနော်တို့ ညပိုင်းကုန်သွားတယ်…ကြည်ကြည်ကတော့တော်တော့ကိုမူးလာတယ်… ……
နောက်နေ့မနက်ကျတော့ ကျနော်နိုးလာတယ်.. ကြည်ကြည်ကလည်းဘေးမှာအိပ်နေတုန်း.. ကြည်ကြည်ကိုဖက်ပီးကျနော် ကနမ်းလိုက်တယ်…ကြည်ကြည်ကလည်းပြန်နမ်းတယ်…. သူ့နို့ ကလေးတွေ ကိုင်လိုက်တာနဲ့ ကျနော်လည်းလီးတောင်လာတယ်… ကျနော်လီးကိုသူက ကိုင်ထားတော့. ကျနော့်လီး တောင်လာတာကိုသူကသိတယ်…စဖုတ်ကိုလက်နဲ့စမ်းလိုက်တော့စိုနေတယ်..
ကျနော်သူ့အပေါ်တက်ခွတော့ သူက နိုင်ဝင်းရှိတယ်လို့ မေးငေါ့ပြတယ်…ကျနော်က မသိချင်ယောင်ဆောင်ပီး သူ့ကိုဆက်ခွတယ်..သူ့စကတ်ကိုလှန်တယ်..သူကရုန်းတယ်…ရုန်းပေမဲ့ ကျနော့အားကို မရဘူးလေ.. အသံမထွက်အောင်ရုန်းရင်းနဲ့ သူ့စဖုတ်ထဲကိုကျနော့လီးက ဝင်သွားပီ.. ဆယ်ချက်လောက်စောင့်လိုက်တော့ သူမရုန်းတော့ဘူး..ကျနော့လိုးတာကို အားရပါးရခံနေပီ…ကျ နော်က ကျနော့ပုဆိုးကိုချွတ်လိုက်ပီး အားရပါးရလိုးတော့တာဘဲ..အဲအချိန်ကျနော့စိတ်ထဲမွန်နေပီ… ကြည်ကြည်ကလည်း ကျနော့ လုပ်တာကို ဖီးတက်နေပီ…သူ့စကတ်ကို ချွတ် တော့ရုန်းသေးတယ်….ကျနော်အတင်းချွတ်ပီး အဝေးကို လွင့်ပစ်လိုက်တယ်… ကျနော့မိန်းမကို နိုင်လင်းအိပ်နေတဲ့ဘေးမှာ ဖင်ပြောင်လိုးနေပီ… ကြည်ကြည်က နိုင်လင်းအိပ်တာကိုနိုးသွားမှာ စိုးတယ်နဲ့တူပါရဲ့…အလိုးခံရင်း နဲ့နိုင်လင်းနိုးမနိုးကို လှမ်းကြည့်တယ်..
ကျနော်ကတော့ဒါကို မသိတော့ဘူး.. လူကလည်းမွန်နေပီလေ အခုအချိန်သာ နိုင်လင်းနိုးလာရင် ကြည်ကြည်ကိုကျနော်လိုးနေတာကို တွေ့မှာဘဲ..ကြည်ကြည်ဖင်ကိုကော..စဖုတ်ကိုရော..ကျနော့်လီးဝင်နေတာကို အတိုင်းသာ မြင်မှာဘဲလေ နောက်ဆုံးတော့…. ကြည်ကြည်သာပီးသွားတယ်..နိုင်လင်းကတော့မနိုးဘူး..ကြည်ကြည်လည်း အဲတော့မှစိတ်သက်သာရသွားတယ်… နောက်ပိုင်း ကျနော်တို့ လင်မယား လိုးကြတယ်..ညဆိုရင်အသေလိုးတယ်..အရှက်တွေလည်းကုန် လာကြတယ်… ကျနော်အံ့သြတာက ကြည်ကြည်က လိင်ကိစ္စကိုအရမ်းစိတ်ပါတယ်.. ရမက်ထန်တယ် ဆိုတာအရင်က မသိထား ဘူး… … ကြည်ကြည်ကလည်း ကျနော်လိုးချင်တာနဲ့ အဆင်သင့်ဘဲ… နဲနဲနမ်းလိုက်တာနဲ့ စိတ်ပါလာတာများတယ် ကြည် ကြည်ဒီလောက်ထန်မဲ့မိန်းမလို့ကျနော်မထင်ထားဘူး…ကျနော်တို့လည်း တစ် ယောက်ကိုတစ် ယောက်ပိုချစ်လာတယ်..အရှက်ဆိုတာ ဘာလည်းလို့တောင်မေးရမဲ့ အခြေအနေကိုတောင်ရောက်လာတယ်…
တစ်နေ့ကြည်ကြည်ကိုကျနော်လိုးနေတုန်း …. ကြည်ကြည်က ကျနော့်ကိုမေးတယ်.. (အကို..ကြည်အရင်က လက်နဲ့သူများဟာတွေ လုပ်ပေးတာ အကိုသိတယ် နော်…) (သိတယ်လေ..အကိုနဲ့နိုင်ဝင်းတောင်ချောင်းဘူးတယ်.). (အင်း…..အကို စိတ်ထဲ ရွံနေမှာစိုးလို့ ..စိတ်မသန့် ဖြစ်မှာအရမ်းစိုးရိမ်တာလေ) (မရွံဘူး…).. (အင်း…..) (မှုတ်ပေးဘူးလား..သူတို့ကို) ကြည်ကြည်ပြန်မဖြေဘဲငြိမ်ကျသွားတယ်…. ကျန်ောထပ်မေးတယ်… (မှုတ်ပေးဘူးလား ) ကြည်ကြည်မဖြေဘူး… ငြိမ်နေတယ်.. ကျနော်ဆက်လိုးနေတယ်.. လီးကိုသူ့စဖုတ်ထဲသွင်းနေတယ်.. (အကိုသိချင်တယ်ကွာ….) လို့ ထပ်ပြောလိုက်မှ (အင်း…..) လို့အသံတိုးတိုးလေးပြန်ဖြေတယ်…. ထူးဆန်းတာက ကျနေ့ာမိန်းမ က သူများလီးကို ကိုင်ဘူးတာ… မှုတ်ပေးတာ ပြောတာ. .ကျနော့်ရင်ထဲ..ခံစားချက်တစ်မျိုး..ဖိန်းတိန်းတိန်း… လီးထဲကို သွေးပို ရောက်လို့လားမသိဘူး… ပိုကြီးလာတယ်..လီးကပိုမာ..ပိုကြီးလာတယ်
(အင်း..အကို စိတ်ဆိုးသွားပလား) (မဆိုးဘူး………….) ကျနော်လိုးတာပိုမြန်လာတယ်…ကြည်ကြည်လဲပိုခံစားနေတယ်.. (မှုတ်ပေးဘူးလား …..)(အင်း….) (မှုတ်ပေးဘူးလား… အင်းလို့မပြောနဲ…..) (မှုတ်ပေးဘူးတယ်…) (အိုး………………..) (မှုတ်ပေးဘူးလား…) (မှုတ်ပေးဘူးတယ်….) (ထပ်ပြော..ကြားချင်တယ်….သူများလီးတွေကိုမှုတ်ပေးဘူးလား) (မှုတ်ပေးဘူးတယ်…) သူများလီးတွေကိုမှုတ်ပေးခဲ့တဲ့ကျနော့်မိန်းမနှုပ်ခန်းတွေကိုနမ်းမိတယ်..(ချစ်တယ်…ကွာ…. ကြည်ကိုချစ်တယ်ကွာ..) (အကို့ကိုလည်းကြည်ချစ်တယ်…)အဲနေ့က ကျနော်အရမ်းလိုးသလို ကြည်လည်း ပီးတာ ၃ ခါတေင်ပြီးတယ်…
ကျနော်က ကျနော့မိန်းမကို ဘာဝတ်ဝတ် ကျေနပ်တယ်..အဖွားကြီးလေးလို မဝတ်ရင်ပီးရောလေ တက်ဆီလေးဆွဲတာကလည်း အဆင်ပြေတယ်..ကိုယ့်ကားဆိုတော့လည်း နင်းကန်မ မောင်းပါဘူး.. ညပိုင်း တက်ဆီဆွဲရင်လည်း ကြည်ကြည်လည်း ပျင်းလို့ဆိုလိုက်စီးတဲ့အခါလည်းစီးတယ်…အဲအခါမျိုးဆို လူကြည့်လိုက်တာပါ..မသင်ကာစရာ ပုံစံမျိုးဆိုရင်.. မလိုက်တော့ဘူး..ကြည်ကြည်ကလည်းပါလာ တေ့ာ သတိထားရတာပေါ့…
ကျနော်က အကြံနဲ့ ကြည်ကြည်ကိုခေါ်တာလေ..အိမ်မှာကတော့ နေရာမျိုးစုံမှာလိုးပီး ဘီ.. ရေချိုးခန်းထဲမှာလည်းလိုးတယ်… မီးဖိုချောင်ထဲမှာလည်းလိုးတယ်. .ကားပေါ်မှာမလိုးရသေးဘူး.. ကားထဲမှာလိုးဘူးချင်တယ်..စိတ်က လေ… ခရီးသည်လိုက်ပို့ပီး အပြန်မှာ အရမ်းမှောင်တဲ့ ကျောက်ကုန်းဘက် က လမ်း တစ်လမ်းဘက် ကို ကားကိုမောင်းလိုက်တယ်… သစ်ပင်အောက်မှာကားရပ်လိုက်တော့.. ကြည်ကဘာလို့ရပ်တာလည်းအကိုလို့ မေးတော့ ဘာမှ မပြောဘဲ သူ့ကိုစနမ်းလိုက်တယ်..သူက လည်းပြန်နမ်းတယ်လေ Crd; Lin
သူငယ်ချင်း (၂) ယောက် အခန်း ( ၂) (ဖြစ်ရပ်မှန်ကိုအခြေခံစိတ်ကူးပုံရိပ်ဖော်ထားသည်)
ကျနော်နမ်းတာကို ပြန်နမ်းတယ်.. (အကိုရယ်သူများတွေ မြင်ကုန်မယ် ကွာ) လို့ ပြောပေမဲ့ ကျနော် ကတော့ မုန်ယိုနေပီလေ… ကျနော်က စိတ်တွေက ထန်နေပီ…နမ်းတာမှ အိမ်မှာနမ်းတာထက်ကိုပို ဖီးလာ တယ်.. မိန်းမရဲ့ ပုခုံး..လည်ပင်း နားရွက်တွေကို အကုန် နမ်းတာ လေ.. ကြည်ကြည်ဆီက ညည်းသံလေး တွေကြားရတယ်..(အကိုရယ်….အင်း…………………..) လို့ဘဲ ညည်းရင်း ကျနော့်ကို ပြန်နမ်းနေတာ…ကျနော်က နမ်းလည်းနမ်း…. ဘေးကိုလည်းကြည့်… ပေါ့.. လူရှင်းနေတဲ့ အမှောင်လမ်းထဲမှာ ကိုယ့်မိန်းမကို ကိုယ် နမ်းရတာ က အိမ်မှာနမ်းရတဲ့ ဖီလင်မျိုးမဟုတ်ဘူး….မတူဘူး…ဗျ… အရမ်းကောင်းနေတယ်…(စာဖတ်သူများ အဲလိုကိုယ့်မိန်းမကို အမှောင်လမ်းမှာနမ်းဘူးရင် ကျနော့ကို မန့်ပေးခဲ့ကြပါ..ကျနော့်ခံစားချက်နဲ့တူလားသိချင်ပါတယ်)
ကျနော်လက်တွေကလည်း ကြည့်ကြည့်ရဲ့နို့တွေဆီကို အလိုလိုရောက်သွားတယ်…နို့ကိုနယ်..နို့သီးလေး တွေကို ပွတ်ပေး…နမ်း …လူတစ်ယောက်ထဲ အလုပ်ကိုများနေ တာပေါ့ (အကိုရယ်…အိမ်ကျမှ ကွာ….. အိမ်ကျမှ အတူတူကဲမယ်ကွာ) …ကြည်ကြည် က ပြောနေပေမဲ့မုန် ယိုနေတဲ့ ကျနော်က တော့ သူဘရာဇီယာကိုချွတ်လိုက်ပီ.. သူမှာ အပေါ်က တီရှပ်ဘဲရှိတော့တယ်… (ကြည် ..အနောက်ခန်းသွားရအောင်) လို့ကျနော်က ပြောလိုက်တယ်…(အကိုရယ်…လမ်းမကြီးမှာ ..ခက်တော့တာဘဲ…သူများတွေမြင်ကုန်မယ်….) လို့သာပြောပေမဲ့.ကားရှေ့ခန်းကနေ ဆင်းပြီးနောက်ခန်းကိုသွားတော့ ကျနော်လည်းနောက်ခန်းကို ဝင်လိုက်တယ်…နောက်ခန်းမှာ နမ်းနေတာ အကြာကြီးဘဲ..နမ်းနေရင်းနဲ့ သူ့လက် က ကျနော့လီးကိုလာကိုင်တယ်..လီးက မကိုင်ခင်ထဲက မာတောင်နေတာ… ကျနော့လီးမာတောင်နေတာကို သိလိုက်တော့… ကြည်ကြည်ပါးစပ်က
“အိုး…………………..အကိုရယ်……………”လို့တောင်အသံထွက်တယ်…ကျနော် သူ့စကတ်ကိုလှန်ပီး ဘောင်းဘီကိုချွတ်လိုက်ပီး ယက်တော့တာဘဲ…အရည်တွေစိုနေပီ..စဖုတ်က… ကျနော့်အရမ်းယက်တော့သူ့ပါးစပ်က ညည်းနေပီ…သူအရမ်းကောင်းတာ ကျနော်သိနေပီ ကျနော့် လီးထုတ်ပီး လီးကို သွင်းလိုက်တာနဲ့ ကျေနပ်အားရတဲ့အသံ ကြည်ကြည်ဆီက ကြားရ တယ်…. ကျနော်လိုးတာ ၁၅ မိနစ်လောက်ကြာတော့ ကြည်ကြည်ပီးသွားဘီ ..ကျနော့် မပီးသေးဘူး… ကြည်ကြည်လည်း တော်တော်မောသွားတယ်… အားရကျေနပ်တဲ့မျက်နှာနဲ့ပေါ့… ကျနော်လည်း မပြီးပေမဲ့ကားပေါ်မှာလိုးလိုက်ရလို့ ကျေနပ်သွားတယ်..အချိန်ကလည်း ၁၁ နာရီကျော်ပီဆိုတော့အိမ်ကိုဘဲကားမောင်းလာမိတယ်… မိန်းမဘရာဇီယာက တော့ကျတော့ ကားရှေ့ခန်းမှာ…ကျနော့ထိုင်ခုံမှာရှိနေတာပေါ့.. မိန်းမ က တီရှပ်နဲ့ စကတ်ဘဲဝတ်ထားတယ်.. အတွင်းခံဘောင်းဘီကလည်း ပြန်မဝတ်ရသေးဘူးပေါ့..ကားနောက်ခန်းမှာဘဲလေ….ကြည်ကြည်ကတော့မောလို့လားမသိဘူး…အိပ်ပျော်နေတယ်….ကျနော်က လည်းမနိုးတော့ဘူး….
ကားကိုအိမ်ဖက်ကို မောင်းလာခဲ့တယ်…တာမွေ ဗိုလ်စိန်မှန်လမ်းဖက်ကိုချိုးလိုက်တော့… ညလုံးပေါက်ဖွင့်တဲ့ ABC Store ဆိုင်နားကိုရောက်တော့… ကော်ဖီမစ်အိမ်မှာကုန်နေတာကို သတိရလို့ ဝယ်မယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ကူးရတာနဲ့ ကားကိုရပ်လိုက်တယ်.. အဲအချိန်မှာ ကြည်ကြည်လည်းနိုးလာတယ်. “အကို ဘာဝယ်မလို့လဲ” “ကော်ဖီမစ်…နင်ကောဘာဝယ်ချင်သေးလဲ… ဝယ်ချင်တာရှိရင်လိုက်ခဲ့” ကျနော် ကားပေါ်က ဆင်းပီးစတိုးဆိုင်ထဲကိုဝင်သွားတယ်.. ဆိုင်ထဲမှာ အရောင်းဝန်ထမ်း အမျိုးသား ၂ ယောက်ရှိတယ်..ကျနော် လည်းကော်ဖီရှာပီး ပိုက်ဆံရှင်းမလို့ကောင်တာကိုသွားတော့…ဆိုင်ထဲကို ကြည်ကြည်ဝင်လာတယ်…ဝန်ထမ်း ၂ ယောက်ရဲ့မျက်လုံးတွေက ကျနော့်ဆီက နေ ကြည်ကြည်ဆီကို လှမ်းကြည့် လိုက်တယ်..ကျနော်လည်း လှမ်းကြည့်မိတယ်…
ကြည်ကြည်က ကားပေါ်မှာ သူ့ဘရာဇီယာကို ကျနော်ချွတ်ထားတော့ တီရှပ်အောက်မှာဘရာဇီယာမပါတော့ဘူး…. အောက်က ဘာမှ မပါတဲ့ တီရှပ်ဝတ်ထားတဲ့ မိန်းက လေးတွေကို မြင်ဘူးမှာပေါ့…နို့ ၂လုံးက အောက်ကဘာမှ မထိန်းထား တော့လှုပ်လှုပ် လှုပ်လှုပ်နဲ့လေ…ရင်သားတွေက တင်းရင်းနေတော့… လှပတဲ့ မြင်ကွင်း ကလေးပေါ့ ဝန်ထမ်း ၂ ယောက်ရဲ့မျက်လုံးတွေက ကြည်ကြည်မြင်တာနဲ့ အရောင်တွေလင်းလက်သွားတယ်..ကျနော့မိန်းမမှန်းမသိကြဘူး…ထင်တယ်…ကျနော်တောင် ကြည်ကြည် ကိုယ့်မိန်းမကို ပစ်မှားချင်စိတ် တဖွားဖွားပေါက်လာအောင် ဆက်စီဖြစ်လွန်းတယ်…နို့သီးရာ လေးတွေ ထင်းနေတဲ့ တီရှပ် နဲ့မိန်းမကိုပြေးနမ်းချင်လောက်အောင်ကို ကျနော်ခံစားရတယ်..
ဆိုင်ဝန်ထမ်းတွေ ဘယ်လိုခံစားဖီးတက်နေမယ်မသိဘူး..ကျနော့မိန်းမကို တခြား ယောက်ျားတွေ ပစ်မှား ကြတာ…ကြည့်နေတာကို ကျနော်ဖီးလာလိုက်တာ…ကြည်ကြည်က ကျနော်တို့ ယောကျား တွေ ဖြစ်နေတဲ့ ဖီလင်ကို သိမယ်မထင်ဘူး….ကြည်ကြည်က သူဝယ်ချင်တဲ့ စားစရာတွေရွေးနေတယ်… ကျနော်က ကြည်ကြည်ဆီကိုလိုက်သွားတယ်…. “ကြည်ကြည်..နင့်ကို ဟိုကောင်၂ ကောင် ပစ်မှားနေတာသိဘူးလား….. လို့ တိုးတိုးလေး သွားပြောလိုက်တယ်….ကြည်ကြည်လည်း ရှက်သွားပုံရတယ်…”အကိုရယ်… သိသာနေလား” လို့ မျက်နှာရဲပီး ရှက်ရှက်နဲ့ပြန်မေးတယ်..အဲအနားမှာ မှန်တစ်ချပ်နံရံမှာချိတ်ထားတယ်… ကျနော့်က မှန်ထဲမှာကြည့်လိုက်လို့ ပြောတော့ ကြည်ကြည် လဲ မှန်ထဲကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့နို့သီးရာတွေထင်းနေတဲ့ တီရှပ်နဲ့သူပုံကို မြင်လိုက်ရတော့…
“စိတ်ညစ်လိုက်တာအကိုရယ်…သေပါပီ” “ဘာခုမှ စိတ်ညစ်မနေနဲ့…ဘာမှ မဖြစ်သလိုနေလိုက်တော့…ဟိုကောင်တွေက နင့်ကို ကြည့်လိုက်တာ.. ပစ်မှားနေတာ..ငါ့ကိုနင့်ယောကျားမှန်းမသိဘူးထင်တယ်…” မိန်းကလေးတွေရဲ့သဘာဝကြောင့် သူနို့သီးတွေထင်းနေတာကို သူ့ရင်ဘတ်ရှေ့မှာ လက်နဲ့ကွယ်လိုက် တယ်…ကျနော်လည်းကြည်ကြည့်ကို ကြည့်ရင်းသနားလာတယ်…..တော်တော်ရှက်နေတာလေ…ရင်ထဲမှာ လည်း သာယာသလို ခံစားနေရ တယ်… ကြည်..ဘာမှ မဖြစ်သလိုနေ…လက်နဲ့လည်းကာမနေနဲ့… သွားကြမယ်..”ကျနော် က ကြည်ကြည်ကိုပြောရင်းသူ့ခါးကိုဖက်လိုက်တယ်…အမှန်က တော့ခါး အောက်ပိုင်းတင်ပါးအပေါ်ပိုင်းကို ပါ…ပိုင်စိုးပိုင်နင်းဖက်လိုက်တာ..ဆိုင်ဝန်ထမ်းတွေ မြင်အောင်ကို ဖက်လိုက်တယ်…
စိတ်ထဲက မင်းတို့ ပစ်မှားနေတဲ့အိုး လှလှ လေးကို ငါစိတ်တိုင်းကျ စားနေတာကို မင်းတို့ မြင်အောင်ကွလို့တောင် ပြောမိသေးတယ်… နို့သီးအရာတွေထင်းနေတဲ့တီရှပ်ကိုလက်နဲ့မကာတော့ဘဲ ရှက်ရှက်နဲ့ ဆိုင်ကောင်တာမှာ ပိုက်ဆံရှင်းနေတဲ့ ကိုယ့်မိန်းမကို ကိုယ်ချစ်လိုက်တာ..ဆိုင်ဝန်ထမ်း ၂ ယောက်စလုံးကတော့ ကြည်ကြည်ရဲ့ နို့တွေကို မကြည့်ဘဲမနေနိုင်ဘဲ ကြည့်နေကြလေရဲ့..ကိုယ့်မိန်းမရဲ့ ရင်သားအလှ လေးတွေကို ပြလိုက်ရတဲ့ကျနောက တော့ ဒီနေ့အဖြစ်က နောင် ကာမပင်လယ်ရေယဉ်ကြောမှာ ကျနော်တို့နှစ်ယောက် မြောပါတော့မဲ့အစ ဆိုတာအဲတုန်းက မတွေးမိခဲ့ပါခင်ဗျား Crd;
Categorized as အငျးဆကျ Tagged သူငယျခငျြး ၂ ယောကျ
သူစိမျး‌ ယောကျြား လီးကွီး